Congress Congress na-achọ nyocha Intanet | Site na Linux
Disinformation bụ otu n'ime nsogbu kachasị na-eche usoro ntanetị mgbasa ozi na nke Washington na gọọmentị ndị ọzọ na-achọsi ngwọta ike.
Na nyocha ọhụrụ nke Mark Zuckerberg, Jack Dorsey na Sundar Pichai n'ihu nzuko omebe iwu nke United States na Tọzdee, ndị nnọchianya ahụ ha gwara ndị isi ụlọ ọrụ atọ ahụ ka ha gbadokwuo na ịntanetị. Usoro a kwesịrị ịhapụ ha ijikwa ọdịnaya ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-ebute site na nyiwe ha, si otú a Ndị Congress na-ekwe nkwa mmegwara mmebe iwu ma ọ bụrụ na ha ekwenyeghi.
Na-ege ntị, ndị omeiwu ebubo na Twitter, Google na Facebook, nke Jack Dorsey, Sundar Pichai na Mark Zuckerberg duziri, nke na-akpata nsogbu na-adịghị n'ịntanetị nye ụmụaka, ahụike ọha na ọchịchị onye kwuo uche ya.
Ndị nnọchi anya kwenyere na nyiwe atọ a nyere aka na mwakpo Jan.6 na Capitol, nke dugara na ebubo ọhụrụ megide onye isi ala Donald Trump. Ọ bụrụ na Dorsey gosipụtara na ya kwenyere na saịtị ya na-ekere òkè ọ bụla na ihe a na-adịghị mma, Zuckerberg na Pichai ajụla ebubo ndị isi a họpụtara ahọpụta.
Ntị ahụ, nke onye isi oche nke Kọmitii onlọ na Energy na Azụmaahịa, Democrat Frank Pallone nke New Jersey, na oche abụọ nke kọmitii submit ya, Mike Doyle (D-PA) na Jan Schakowsky (D-IL) kpọrọ, bụ ngosipụta. nke mgbalị ikike aka ike na Congress na-eto eto iji nweta njikwa nke ụlọ ọrụ ndị a na-eme n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọdịmma ha na ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ezie, nke a bụ oge nke atọ n'ime ihe na-erughị ọnwa ise na US Congress kpọkọtara ndị isi nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Ebumnuche bụ ịmanye ha ma mee ka ha nyochakwuo ọdịnaya na nyiwe ha. Dabere na ndị nnọchi anya Democratic, Twitter, Google na Facebook adabaghị n'ọrụ ha nke na-enyocha olu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịnaya echiche ha chere na-emegiderịta onwe ha ma ọ bụ na-emerụ ahụ.
N'ịkpọ maka imechikwu iwu, ha sooro arịrịọ ha na egwu nke mmegide iwu na-abịanụ (gụnyere ịkagbu nnwere onwe n'okpuru Usoro 230 nke Iwu Iwu Nkwupụta Nkwado) iji mezuo iwu.
Ndi otu Republican riri oke na mkpesa ha iweghara nchegbu. Dị ka ha si kwuo, ndị dike a na-elekọta mmadụ na-agbachi nkịtị olu olu. iji kwalite usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emesapụ aka. Ọtụtụ ndị Republicans siri ọnwụ na nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ na-egbochi mgbochi nke ụlọ ọrụ teknụzụ na-enwe n'okpuru Nkebi nke 230.
Ha kwenyere na site na nyocha intaneti karịa, ntanetị mgbasa ozi na-arụ ọrụ ugbu a dị ka ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị na-anọpụ iche na-ezipụ ozi.
Fọdụ ndị otu Republicans esorola ndị otu Democrats na-akpọ oku ka a gbasaa mmachi, ma ọ bụ kpọmkwem n’aha ichebe ụmụaka pụọ ​​n’ọrịa ọgụgụ isi na ndị na-eri ibe ha kama ime ihe kwekọrọ n’echiche.
Mgbe Zuckerberg na Pichai egosighi oke iwe Na ndị nnọchianya na Tọzdee, Dorsey pụtara na njedebe nke ndidi na ndidi ya maka nyocha ahụ. N'otu oge, o kwuru hoo haa na ọ bụghị ọrụ gọọmentị na usoro mgbasa ozi ọha na eze ịbụ ndị na-ekpe ikpe n'eziokwu. Ọ sị, "Echeghị m na anyị kwesịrị ịbụ ndị ikpe mkpegbu nke eziokwu na echeghị m na gọọmentị kwesịrị ịbụ."
Dị ka ụfọdụ ndị na-eme nnyocha si kwuo, ọ dị mkpa ka anyị ghara ichefu otú ndị a "si achị ọchịchị" n'ezie. Ọ dị mfe ileghara anya, ha na-ekwu, n'ihi na ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ejirila ya nke ọma na-achọ ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-enyocha internet na uche ha.
Dị ka ihe ncheta, Parler, nke n'oge ahụ bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ebudatara na mba ahụ, si na Apple na Google Play na-echekwa na Jenụwarị, emesị gọnarị ọrụ ịntanetị site na Amazon, mgbe mmadụ abụọ iwe were ndị Democratic wee gaa n'ụlọ nke ndị nnọchi anya. Ndi nnochite anya choro ya n'ihu oha.
N'oge ịnụrụ ntị "usoro" ọhụụ nke ndị Congress haziri, Senator Ed Markey (D-MA) kwuru n'ụzọ doro anya na mkpesa ndị Democrats abụghị na ụlọ ọrụ ndị a na-enyocha oke, mana ezughị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Congress Congress na-achọ nyocha Intanet
Mercuro Chrome dijo
"... mkpesa ndị Democrats abụghị na ụlọ ọrụ ndị a na-enyocha oke oke, mana ezughi oke." ... Ya mere na anyị ghọtara ya nke ọma: mkpesa nke "Democrats" bụ na ha anaghị enyochacha ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụghị. . N’aka ozo, agha aghaghi ime ya onu, mechie onu ma mechaa kpochapu ndi mmadu.
Otu onye kwuru, na-ekwu maka ọbịbịa nke iyi ndị fasizim na United States: "Ndị fascist nke echi ga-akpọ onwe ha ndị na-emegide fasizim."
Zaghachi Mercuro Cromo
Machị 2021: Ihe ọma, ihe ọjọọ na ihe na-adọrọ mmasị nke sọftụwia efu